ဆုံဆည်းရာ: ကလေးတယောက် စာရေးဖြစ်သွားခြင်း အကြောင်း ….
ကလေးတယောက် စာရေးဖြစ်သွားခြင်း အကြောင်း ….
ယူကျုဘ် ဆိုရင် အတော်များများက သိပြီးသားမို့ ထူးပြီး မိတ်ဆက် ပေးမနေတော့ ပါဘူး။ တလောလေးက ယူကျုဘ်ကျေးဇူးနဲ့ တေးဂီတ နောက်ခံ ကဗျာကလေးတပုဒ် လို့ ဆိုရင် ရမယ်ထင်ပါရဲ့၊ ကဗျာစာစုကလေးကို အမှတ်မထင် ခံစားဖတ်ရှုလိုက်ရတယ်။ တယောက်ထဲ ခံစားရတာ အားမရနိုင်လွန်းလို့ အများကို မျှဝေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ဒီစာကို ရေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အကြောင်းအရာကလေးက ရိုးရှင်းတယ်။ မေ့မရအောင် ခံစားရတယ်။ ဒီကနေ့ ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရရင် ဟတ်ထိသွားစေတယ်ပေါ့။ နောက်တခုက ဒီနေ့ခေတ် လူငယ် တွေကို အကဲဖြတ်ရာမှာ သူတို့ရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံကို ကြည့်ပြီး အထင်သေး၊ အမြင်သေး မိရင် မှားသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိကိုလည်း ရလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူက အီကို ဒေ့ခ်ကိုနီ ( Eko Daekoni ) ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိ ဆာဘီးယားနိုင်ငံ နိုဗီဆက် မြို့မှာနေတယ်။ သူ့ကို ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ( ၇ ) ရက်နေ့ မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ခုဆို ၂၃ နှစ်ကျော်လို့ ၂၄ နှစ်ထဲမှာပေါ့။ သူ့ အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တွေ က ၀ီလျံရှိတ်စပီးယားရဲ့ စာအုပ်တွေ ဖြစ်တယ်။ သူ့မှာ ရေးပြီးသား စာအုပ် နှစ်အုပ် ရှိတယ်။ Diary for an Angel နဲ့ It'sanew day and it is beautiful တို့ ဖြစ်ပြီး ရေးလက်စ စာအုပ်ကတော့ For Love, when I imagine ဖြစ်ပါတယ်။
အီကိုဟာ ယောက်ျားကလေး တယောက်ဖြစ်တယ်။ မဆုံးနိုင်တဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ နေထိုင်သူဖြစ်တယ်။ သူကြိုက်နှစ်သက်တာက မြူးဇစ် (Music) တေးဂီတ ဖြစ်တယ်။ ဗေးထိုးဗင်၊ မိုးဇက်၊ ချိုက်ကော့ဗ်စကီး စတဲ့ စန္ဒယား ဆရာကြီးတွေရဲ့ ဂန္ထ၀င် စန္ဒယား လက်သံတွေကို နှစ်သက်စွဲလမ်းသူ ဖြစ်တယ်။ သူနှစ်သက်တဲ့ တူရိယာ ပစ္စည်းတွေ က တော့ တယော(Violin)၊ အခူးစတစ် ဂီတာ (Acoustic Guitar)၊ စန္ဒယား၊ အာဟူး(Erhu) လို့ ခေါ်တဲ့ ကြိုး၂ချောင်းတပ် တရုတ်တယောနဲ့ ပီးပါး(Pipa)လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်မယ်ဒလင် တမျိုး တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေါ်ပြပါ အီကိုရဲ့ နောက်ခံသမိုင်းကားတွေကိုတော့ သူ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မှာ တင်ထားသမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလထဲမှာ သူနှစ်သက်တဲ့ တေးသီချင်း၊ တေးဂီတနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ရေး တေးဂီတနောက်ခံ ကဗျာ (သို့) ရသစာစု ကလေးတွေကို ယူကျုဘ် ( You Tube ) မှာ တင်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ထဲကမှ ကျနော့်ကို စတင် ခံစားစွဲငြိသွားစေတဲ့ “ အိပ်မက် ( သို့ ) အမှတ်တရလေး တခု ” ( Dream oraMemory ) ဆိုတဲ့ ဂီတ နောက်ခံ ကဗျာ ကလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့် ခံစားရမှုကနေ ကျနော့်စာကို ခေါင်းစဉ် ပေးဖို့ စဉ်းစားတော့ “ကလေးတယောက် စာရေးဖြစ်သွားခြင်း အကြောင်း” လို့ ပေးဖြစ် တယ်။
“ ဧည့်ချိန်ဟာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ။
အထီးကျန်ဆန်လွန်းလှတဲ့ ကျနော့အတွက် အခန်းကလေးထဲမှာ ကျနော်ဟာ ခေါင်မိုးမျက်နှာကျက်ကို ၀မ်းနည်းစွာ ငေးစိုက်ကြည့်နေရင်း ကုတင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းနေ ခဲ့တယ်။
ဖေဖေနဲ့ မေမေက ကျနော့်ကို သတင်းစာတွေနဲ့ ထားပြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ အချိန်တွေ မြန်မြန်ကုန်ဆုံးနေပါစေပေါ့။
သို့ဖြစ်သော်ငြား ကျနော် သူတို့ကို ဘယ်တုန်းကမှ၊ ပြီး ဘယ်တော့မှ ပြောပြလိမ့် မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီသတင်းစာတွေကို ကျနော် တစောင်မှ မဖတ်ခဲ့ဘူး ဆိုတာ … ။
သတင်းစာတွေထဲက စာကြောင်းတွေအောက်မှာ ကျနော် မျဉ်းတွေ သားထားခဲ့ တယ်။ ပုံစံကတော့ ကျနော် သတင်းစာတွေကို ဖတ်နေခဲ့တယ်ပေါ့ …။
တကယ့် အရင်းခံမှာတော့ ကျနော်ဟာ အတော့်ကို ငြီးငွေ့ နေခဲ့ပါတယ်။”
ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင် ကလေးဟာ ဆယ့်လေးနှစ်သားလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်းထဲက အီကိုရဲ့ တင်ဆက်မှုမှာတော့ ကလေးဟာ သေးကွေး ကျုံလှီလွန်းနေတယ်။ သူနဲ့ဆိုရင် အတော့်ကို ကြီးမားနေတဲ့ သစ်သားကုလားထိုင်ကလေး မှာ ထိုင်နေတယ်။ အခန်းက ခပ်မှောင်မှောင်ရယ်။ ပိတ်ထားတဲ့ ပြူတင်းပေါက်မှန်ကနေ အလင်းရောင်ဟာ ခပ်မှိန်မှိန် ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်နေတယ်။ သူကလေးက ပြတင်းပေါက် ကနေ အပြင်ကို ငေးမျှော်ကြည့်လျက် …. ။
“ အဲဒီလို ငြီးငွေ့မှုတွေကနေ ၀မ်းနည်းမှုတွေကိုသာ ကျနော့်မှာ ပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ …
ကျနော့်အနေနဲ့ အသေအချာ ရည်ညွှန်းဖေါ်ပြသင့်တာကတော့ ကျနော်ဟာ အသစ် ဖြစ်တဲ့ နွေးထွေးကြင်နာမှုတခုကို စောင့်မျှော်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ …
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာလည်း သိပ်တော့ အရေးမကြီးပါဘူးလေ။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျနော့်မှာ အလှူရှင်တယောက်နဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် တို့ အခိုင်အမာ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်ပေါ့”
ဧည့်ချိန်၊ ပြန်သွားတဲ့မိဘများ၊ အခန်း၊ ကုလားထိုင်၊ ကုတင်၊ အလှူရှင်၊ ခွဲစိတ်မည့် ဆရာဝန်၊ သတင်းစာများ စတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ကလေးဟာ ခွဲစိတ်ကုသ ခံရမယ့် လူနာတယောက်ဆိုတာ သိလာရတယ်။ ဘာရောဂါကြောင့် ဘာကို ခွဲစိတ်ကုသရမှာလဲ။ ဒါကို အီကိုက မပြောဘူး။ ကလေးရဲ့ အထီးကျန်မှုနဲ့ ငြီးငွေ့စွာ နေထိုင်ရမှုတွေကိုပဲ ပြော တယ်။ ပြတယ်။
“ ခုအချိန်မှာ ကျနော် အကြောင်းပြချက်ပေးဖို့အတွက် ဒါကိုရေးပါတယ်။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ခုချိန်မှာ ကျနော် ဒါကို ရေးမိမယ် မဟုတ်ပါဘူး …
ကတိတခုလည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာ ကျနော်ပြုမူခဲ့တာအမှန်ပါ။ အခန်းကျဉ်းကလေးထဲ ကျနော့်ရဲ့ သမားရိုးကျ ငြီးငွေ့ အထီးကျန်ဆန်မှု နေ့ရက်တွေ … ခေါင်မိုးမျက်နှာကျက်ကို ၀မ်းနည်းစွာ ငေးစိုက်ကြည့်နေရတဲ့ အချိန်ကာလ များ …”
ရောဂါ ဝေဒနာရှင်ကလေးဟာ ဘာတွေကို ကတိပေးခဲ့သလဲ။ ဘာတွေပြုမူခဲ့သလဲ။ ပြီးတော့ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ။
“ ထိုစဉ် … အခန်းတံခါးဝဆီက တိတ်တဆိတ် မြည်သံတခု …ရိုးအီ နွမ်းယိနေတဲ့ အခန်းရဲ့ သက်ငြိမ်မှုကို ချေမှုန်းဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ အသံ … ကျနော်ဟာ ဦးခေါင်းကို တဖက်သို့ လှည့်ရင်း အသံလာရာဆီကို ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အဖွားအို တယောက်ပါလား …။ သူမက ဆေးထိုးအပ်ရာ ဒဏ်ရာ ဗရပွရှိနေတဲ့ ကျနော့် လက်ကို ကရုဏာသက်စွာ ကြည့်ရင်းက …
“အဆင်ပြေရဲ့လား ကလေး” လို့ တိတ်တိတ်တိုးတိုးကလေး မေးလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ထူးဆန်းလှတဲ့ အပြုံးဟာ သူ့မေးခွန်းကို လိုက်ပါ ခွန်အားဖြည့်နေခဲ့တယ်။
“ ကျနော် ခွဲစိတ်ဆရာဝန် တယောက်ကို စောင့်နေတာပါ”
သူမဟာ အခန်းထဲကို လှည့်ပတ်ကြည့်တယ်။ ကျနော်ထိုင်နေကျ ကုလားထိုင် ကလေးကို တွေ့တယ်။ ကုလားထိုင်ကို ကျနော့ ဦးခေါင်းနဲ့ နီးရာဆီ ဖြေးဖြေးလေး ဆွဲယူပြီး သက်သောင့်သက်သာ အနေအထားနဲ့ ထိုင်နေတော့တယ်။
“ အမေ့နာမည်က ဂျူးလိယက်ပါ။ သား နာမည်ကရော”
“ ဒင်န်နီ ပါ ”
“ အသက်ကရော ”
“ ဆယ့်လေးနှစ် ”
“ သားကိုတွေ့တော့ အမေ့သားကို အမှတ်ရလာတယ် … ”
အမေအိုရဲ့ မေတ္တာတရားဟာ ကလေးကို ကူးဆက်ခံစားသွားစေတယ်။ ရောဂါ သည် ကလေး တောင်းဆိုလိုချင်နေတဲ့ နွေးထွေးကြင်နာမှု အသစ်ဟာ ဆိုက်ဆိုက် မြိုက် မြိုက် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီကော …
“ ဒီလို သူမနဲ့ ကျနော်တို့ ဆုံတွေ့မှုဟာ ကျနော့်အတွက်တော့ အလွန့်ကို ကြီးမားတဲ့ စိတ်ချလုံခြုံမှုကို ခံစားစေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခံစားမှုဟာ ကျနော့်အတွက် အလွန့်ကို ရှည်ကြာ နေမယ့် ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်ပါတယ် … ။
ကျနော့် လက်တွေက ကျနော့ဗိုက်သားပြင်ကလေးကို ပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်မိတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သောက်ခဲ့ရတဲ့ ဆေးဝါးတွေက အော့ချင်၊ အန်ချင်ဖြစ်ရတယ်။ သူမရဲ့ လက်တွေက ကျနော်ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးသက်သာ စေခဲ့ပါတယ်။ ပြီး သူမဆီက တိုးတိတ်ညင်သာ အသံကလေးကို ကြားလိုက်ရတယ် …
“အားလုံး ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ် ကလေးရယ်”
အမယ်အိုရဲ့ မေတ္တာနဲ့ ကရုဏာတရား အပြုအမူတွေဟာ ရောဂါသည် ကလေးကို နာကျင်အထီးကျန်မှုတွေဆီက လွတ်မြောက်နေစေခဲ့တယ်။
“ စင်္ကြံတလျှောက်မှာတော့ ထွန်းထားတဲ့ မီးသီးများဆီမှ လင်းရောင်ခြည်တန်းများ … အဲဒီ အလင်းတန်းတွေဟာ သူမရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ မှေးမှိန်သိမ်ငယ်လို့ … သူမရဲ့ နောက်ဖက်မှာတော့ မီးအလင်းရောင်ခြည်တန်းတွေဟာ သူမကို မယှဉ်နိုင် မှေးမှုန်ပျက်ဆီး လို့ …
သူမ တိုးတိုးကလေး ပြောခဲ့တဲ့ အရာရာတိုင်းဟာ တကယ့်ကို ကျနော့်စိတ်ထဲ ပီတိ အထာကျလာနေပါတယ်။ ကျနော် သူမကို ယုံကြည်လာခဲ့တယ်။ သူမဟာ သီချင်းတပုဒ်ကို စတင် သီဆိုလိုက်တယ်။ အဲဒီနေ့က သူမဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းကို ကျနော် မမှတ်မိနိုင်တော့ပါဘူး ။ သီချင်းကို ဘယ်လို ဆက်ဆိုနေခဲ့သလဲ။ မှေးစင်းနေတဲ့ ကျနော့်မျက်လုံးများ … ကျနော့် ၀မ်းဗိုက်ကို ကျနော်ပွတ်သတ်ကိုင်တွယ်နေရင်း …က
“ အမေဟာ နတ်သမီး တပါးလား ဟင်”
သီချင်းသံဟာ ရုတ်ချည်း ရပ်သွားတယ်။
“ သားကြီးလာရင် ဘာလုပ်ချင်၊ ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲ ကွယ် ”
“ ကျနော် စာရေးချင်တယ် အမေ ”
“ ဘာဖြစ်လို့ မရေးနိုင်ရမှာလည်း သားရယ် ”
“ အမေ့ကို ကတိတခု ပေးရမယ်နော် … အဲဒီကတိကတော့ သား အနေနဲ့ ခု ဒီအိပ်မက်ကို ဘယ်တော့မှ မစွန့်လွှတ်ပါဘူးလို့ ”
“ ကျနော် ကတိပေးပါတယ် ”
ကျနော် ထပ်ပြီး ခံစားနားဆင်ခွင့်ကို ရခဲ့တယ်။ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး သိပ်ချစ်စရာ ကောင်းလှတဲ့ သူမသီဆိုနေတဲ့ သီချင်းကိုပေါ့ … ။
ခုထိ ဇာတ်လမ်းက အိပ်မက်ဆန်နေတုန်းပါပဲ။ အမေအိုတောင်းတဲ့ ကတိကို ကလေးက ပေးလိုက်တယ်။ သူကလေးအနေနဲ့ တကယ်ကတိတည်မှာလား။ အိပ်မက် ကရော ဘာပါလဲ …။
“ နောက်တနေ့ နံနက်ခင်းမှာ ကျနော် အိပ်ရာကနေ နိုးလာပါတယ်။ ကျနော့် မျက်လုံးတွေက အမေအိုကို လိုက်လံရှာဖွေလျက် … သူမ မရှိတော့ပါလား။ ကုလားထိုင် ကလေးက နေမြဲအတိုင်း ဘယ်ကိုမျှ မရွေ့လျားခဲ့ သလိုလို …
ကျနော့်အတွက် ငှားထားတဲ့ သူနာပြု ဆရာမလေးကို လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။
“ ဂျူးလိယက် ဘယ်မှာလဲ ဆရာမ ”
“ ဘယ်က ဂျူးလိယက်လဲ ကလေး”
ဆရာမကို ကျနော် အသေးစိတ် ကြိုးစားပြီး ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ညက ဆုံတွေ့ခဲ့ ရတဲ့ အမယ်အို ဂျူးလိယက် အကြောင်းကိုပေါ့။
“ ဒါ အိပ်မက်ပဲ ဒင်န်နီ။ ဒါဟာ အိပ်မက်သက်သက်သာ ဖြစ်တယ် ကလေး”
ဆိုတော့ ဒင်န်နီ နဲ့ ဂျူးလိယက် တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုဟာ အိပ်မက် တခုသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒင်န်နီဟာ အဲဒီအိပ်မက်ကို တကယ့်အဖြစ်အပျက်လို့ သဘောထားခံယူ လိုက်ပုံ ရပါတယ်။
“ ဒီမနက် မိဘတွေ ဧည့်လာတွေ့တော့ အမေ့ဆီမှာ ကျနော် တခု ပူဆာခဲ့ပါတယ်။ အနီးဆုံးနေရာမှာရှိသော စတိုးဆိုင်ကနေ ကျနော့်အတွက် စာတလုံးမျှ ရေးသားထားခြင်း မရှိသေးတဲ့ မှတ်စုစာအုပ် တအုပ်ကို ခုချက်ချင်း ၀ယ်ပေးပါလို့ …
ထိုနေ့ကစလို့ ကျနော် စာကို စတင်ရေးသား နေခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှလည်း စာရေးခြင်းကို မရပ်ခဲ့ဘူး … ဘယ်တော့မှ … ဘယ်တော့မှ …
“ ကျေးဇူးပါ ဂျူးလိယက် … ”
“ ကျနော့်ရဲ့ အိပ်မက်နတ်သမီး … သို့ ”
ရည်ညွှန်း။ ။ http://www.facebook.com/ekodaekoni
Posted by ကိုဈာန် at 9:54 AM